योजनागत रूपमा नै काम हुनेछ : मन्त्री रामशरण बस्नेत
By administrator on	 January 26, 2021 अन्तरवार्ता, देश, नमुना ग्राम सञ्चार अभियान, फोटो फिचर, स्थानीय, स्थानीय तह
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले गैँडाकोटका विकासनिर्माणका योजनाहरुको अनुगमन गर्नुभएको छ । आइतबारगैँडाकोट १८ को अवलोकन गर्दै उहाँले जनतालाई विकासको आभासगराउने गरीप्रदेशले काम गरिरहेको बताउनुभयो । सो क्रममा उहाँ गैँडाकोट १८ को उच्च पहाडी क्षेत्र दमार, बसेनीलगायतका स्थानको अवलोकन गर्नुभएको थियो । प्रदेशले सो क्षेत्रमा गरेका विकास निर्माण कार्यको निरीक्षण गर्दै जनताकै सहजताका लागि र समृद्ध प्रदेश बनाउने हेतुले विकास निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइने बताउनुभयो । अवलोकनका क्रममा गैँडाकोट १८ का समस्यालाई गैँडाकोट नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख विष्णुकुमारी कंडेल, गैँडाकोट १८ का वडाध्यक्ष तिलबहादुर चितौरेलगायतले जानकारी गराउनुभएको थियो । सो क्रममा प्रदेश सांसद रोशन गाहा मगर, विष्णुप्रसाद लामिछाने लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । यसै सन्दर्भमा हामीले गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, मन्त्री बस्नेतसँग माया कंडेलले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
राष्ट्रिय राजनीतिले विकास निर्माण कार्यमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित हँुदा प्रदेशमा त प्रभाव पर्छ नै तर गण्डकी प्रदेशमा भने यसले धेरै प्रभाव पारेको छैन । तीन तहका सरकार हँुदा तीन तहकै सरकारले फरक बजेट ल्याएको हुनाले विकासमा खासै प्रभाव त पर्दैन तर संघीय सरकारसँग बजेट कार्यान्वयन नभइसकेको र स्वाभाविक रुपमा प्रदेश र स्थानीय सरकारसन्ग बजेट आवश्यक परेको हँुदा छिटफुट रुपमा प्रभाव पारेको छ ।
विकासमा कोरोनाको प्रभाव कस्तो देखिन्छ ?
कोरोनाले प्रभाव पारेपनि विकास निर्माणका काम हामीले रोकेनौं । कोरोनाका कारण जति हुनुपर्ने हो त्यति नभए पनि केही प्रभाव त पा¥यो । गण्डकी प्रदेशका कैयौँ खोलामा पुल बनेको छ । विद्युतीकरण पुगेको छ । बाटो बनेको छ । विकासले गति लिएको छ । मैले भन्नुभन्दा जनताले यसको मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार बनिसकेपछि गण्डकी प्रदेशमा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु अगाडि बढेका छन । जनतालाई सहज बनाउने हिसावले प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ । समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक बनाउने तर्फ नै हामी अगाडि बढेका छौं ।
नवलपुरमा नमुना सदरमुकाम बनाउने योजनामा किन ढिलाइ भइरहेको छ ?
नवलपुर धेरै जनसंख्या भएको सहरका रुपमा विकसित हुँदै छ । बसाइसराइ तीव्र छ । गुरुयोजना नबनाई जहाँ पायो त्यहीँ बस्ती बसाल्नाले सहर कुरुप हुन्छ । योजनाअनुसार नै अगाडि बढनुपर्छ । घरहरु पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण फर्कने गर्दा कुरुप बन्छन्। अहिले सहरीकरणका विषयमा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छैन । संघीय सरकारले विशेष ध्यान दिन सके पक्कै छिटो बन्छ । प्रदेश सरकार आएपछि जनताको अपेक्षा नै पूर्वाधार विकासमा नै छ । त्यसैले पनि हामीले त्यसतर्फ ध्यान दिएर अगाडि बढेका छौं ।
गैँडाकोट १८ नम्बर वडामा बाटोको समस्या कहिले अन्त्य हुन्छ ?
गण्डकी प्रदेशमा ३६ निर्वाचन क्षेत्र छ । ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा एक निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत रहेर बाटो खनिएको हो र योबाटो अहिले वन कार्यालयले मुद्दा दायर गरेर अदालतमा छ । एउटाले उजुरी हालेर मुद्दा फाइनल नभएसम्म केही गर्न सक्दैनौं । हामी चाहिरहेका छौ यो बाटो बनोस् र नागरिकले सुविधा पाउन भन्ने होतर अदालतमा मुद्दा र बाटोमा रुख ढलेको छ त्यो रुख पन्छाउने अधिकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई छैन । यो मुद्दा टुङ्गियो भने जनताले छिटो राहत पाउँथे र विकास हुन्थ्यो भन्ने हो । यसको जानकारी हामीले वन मन्त्रालयमा पनि गराएका छौं । जनतालाई सेवा दिने कुरामा हामी लागिरहेका छौं ।यातायातका कारण समयमै अस्पताल जान नपाउदा मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् तर हामी यो बाटोलाई बनाउने प्रतिबद्धताका साथ अघि बढेका छौं । हामी यो समस्या समाधान गर्ने र बाटो बनाउने किसिमले अगाडि बढेका छौं । यसले पनि चाँडै पूर्णता पाउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
गैँडाकोट १८ को अवलोकन गरिरहँदा कस्तो महसुस गर्नुभयो ?
नवलपुर तराईको भूभाग भनेर जसरी सोचिरहेका थियौं, १८ नम्बर आइरहँदा एउटा दुर्गम बस्तीका रुपमा रहेको आपूmलाई अनुभूति भयो । यहाँ सडक, सिंचाइलगायत हरेक समस्या छ तिी समस्याको समाधान गर्नका निम्ति योजना बनाउनुपर्छ र समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेको छु । योजनागत रुपमा नै काम हुनेछ भन्ने कुरामा सम्पूर्णलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।